Halloween decorations accesseries – Thet Nandar
Halloween decorations accesseries
Posted on September 27, 2011 July 3, 2014 by Thet Nandar
Halloween အိမ်အလှဆင် ပန်းများ နှင့် သမီးလေး
ရွှေဖရုံသီးကို ဒီဇိုင်း အမျိုးစုံ ပြင်ဆင်ထားတာ။
ဒီပစည်းတွေကတော့ Halloween ပီးသွားလည်း မီးဖိုချောင်ထဲမှာ အသီး (သို့) ကြက်ဥ (သို့) ကြက်သွန်နီ ထည့်လို့ရသလို။ ရွှေဖရုံသီး ပုံစံ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းတဲ့ စင်လေးလည်း အမြဲတန်း အိမ်အလှဆင်လို့ ရတာပါပဲ။
(တချို့ပစည်းတွေက Halloween deco (or) X’mas deco က အဲဒီနေ့တွေ ပီးရင် ကတ်ထူဗူး နဲ့ ပြန်သိမ်းပီး စတိုခန်းမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး သိမ်းထားရတာမို့)
Marple leaf ကြိုးတန်းလေးက လှတယ်။ ပန်းခြင်းတောင်းလည်း လှတာပါပဲ။
တံခါးဝမှာ ချိတ်တဲ့ဟာ။ ၀ယ်လည်း ၀ယ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ခရစ်စမတ်ကျရင်လည်း X’mas decoration တွေ ၀ယ်ရအုံးမှာ။
တံခါးဝမှာ အလှဆင်တဲ့ ရွှေဖရုံသီးများ။ အရုပ်တွေကတော့ လှေကား အတက်အဆင်းမှာ ထားရင် လည်း လှသလို လက်တန်းဘောင်မှာ ထားရင်လည်း လှတယ်။
အနီးကပ် ရိုက်ပြထားတာ။ ၀ယ်တာတော့ မ၀ယ်ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ အမေရိကားမှာ ရောင်းတဲ့ Halloween decoration ဒီဇိုင်းတွေကို ကိုယ့် အိမ်လာလည်တဲ့ ရွှေဧည့်သည်တွေကို ပြချင်တာ 🙂
ဒါက တလုံးကို 97 ¢ ။ ကလေးတွေ နဲ့ ဆိုတော့ သူ့ရဲ့ အမှုန် ကပ်နေသလို လို အသားတွေကို ဈေးပေါပေမယ့် သိပ်မကြိုက်ဘူး။ ရွှေက ပန်းအလှဆင်တဲ့ဆိုင်တွေမှာလည်း ဒီလိုမျိုး ပစည်းတွေ ၀ယ်လို့ရတယ်။
အိမ်နီးချင်း အိမ်တွေသွားပီး တံခါးခေါက် ” Trick and Treat ” ဆိုပီး candy တောင်းတဲ့ အခါမှာ ကိုင်တဲ့ လက်ဆွဲပုံးလေးတွေ ….
ကလေးတွေကို လက်ဆောင်ပေးတတ်တဲ့ ပစည်းတချို့ …..
Small rice cereal bars
Small packages of cheese and crackers
Small packages peanut butter and crackers
ဒါလည်း Cookie Cutter ပဲ။ သူက ကော်နဲ့ လုပ်ထားတာ။ ၂ ကျပ်နီးပါး။ ဒီဇိုင်း ၆ မျိုး
ဒါက သံ cookie cutter ,3ခုကို ၃ ကျပ်နီးပါးပဲ။ ဘေးမှာ sticker.
crown ဘီးကုပ်ဝတ်ပီး မှန်ကြည့်ရင်း သဘောကျနေတာ။ မှန်က စကားလည်း ပြောတယ်။
အရုပ်မှန်က 25 $ ကြီးများတောင်
tinker bell အကျီ
ခြံထဲမှာ ချိတ်တဲ့ ဌက်အိမ် ၊ အစာ
9 10 11 ရက်နေ့ Halloween Decorations Accesseries
Categories: U.S.A - 2011 Halloween, U.S.A - My Children, U.S.A - Shopping, U.S.A - Shopping Mall, U.S.A - Wall Mart
2 thoughts on “Halloween decorations accesseries”
အစ်မရေ၊ ညီမသာ ကလေးအရွယ်ရှိသေးတယ်ဆို စကားပြောတဲ့ မှန်ကို ဝယ်ပေးဖို့ပူဆာမှာ အမှန်ပဲ။ လောကမှာ ဘယ်သူအချောဆုံးလဲလို့ မေးရင် ကိုယ်လို့ ပြောမယ့် မှန်မျိုးပေါ့။ 😛
အဲဒီမှန်ရှေ့မှာ ရပ်ပီး မှန်ကြည့်လိုက်ရင်
” You're Pretty”
ဆိုပီး Magic mirror က စကားပြောတယ်လေ။
US$ 25 ကြီးမှာတောင် …. 😀
NextLunch box # 08